Into the Ashes – Android App Zone
IMDb Rating 6.2/10 ထိရရှိထားတဲ့ Action ကားကောင်းတစ်ကားပါပဲ
နစ်ဘရင်နာ ဟာ အရင်ကတုန်းက မကောင်းမှုပေါင်းစုံ . မှုခင်းဖြစ်ရပ်မျိုးစုံကို ကျူးလွန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ကျင်လည်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေရှောင်ထွက်လာခဲ့သူပါ။ လက်ရှိမှာရိုးရိုးသားအလုပ်အကိုင်တစ်ခုကိုလုပ်နေပြီးချစ်ရတဲ့ဇနီးသည်နဲ့အေးချမ်းနေ့ရက်တွေကိုဖြတ်သန်းနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာဆိုတဲ့အမျိုးက မီးခွက်ထွန်းရှာပြီး လာတတ်
တာမျိုးဆိုတော့ အရင်တုန်းက သူ့ကြောင့်အထိနာခဲ့တဲ့ ရာဇဝတ်ကောင်တွေက သူ့ကိုပြန်လည်ခြေရာခံပြီး လက်စားခြေတဲ့ဖြစ်စဥ◌်ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ခန်လန်းလန်းတွေ့မြင်ရမယ့် ကားမျိုးပါ။ ဒီလက်စားခြေမှုကလည်း နစ်ကို အရင်လိုဘဝကြမ်းကြမ်းထဲကို ပြန်လည်ဆွဲခေါ်သွားတော့တာပါပဲ။
နစ္ဘရင္နာ ဟာ အရင္ကတုန္းက မေကာင္းမႈေပါင္းစုံ . မႈခင္းျဖစ္ရပ္မ်ိဳးစုံကို က်ဴးလြန္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းမွာ က်င္လည္ခဲ့ၿပီး​ေနာက္ပိုင္း အဲ့ပတ္ဝန္းက်င္ကေနေရွာင္ထြက္လာခဲ့သူပါ။ လက္ရွိမွာ ႐ိုး႐ိုးသားအလုပ္အကိုင္တစ္ခုကိုလုပ္ေနၿပီး ခ်စ္ရတဲ့
ဇနီးသည္နဲ႔ေအးခ်မ္းေန႔ရက္ေတြကိုျဖတ္သန္းေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပႆနာဆိုတဲ့အမ်ိဳးက မီးခြက္ထြန္းရွာၿပီး လာတတ္။တာမ်ိဳးဆိုေတာ့ အရင္တုန္းက သူ႔ေၾကာင့္အထိနာခဲ့တဲ့ ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြက သူ႔ကိုျပန္လည္ေျခရာခံၿပီး လက္စားေျခတဲ့
ျဖစ္စဥ◌္ကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ခန္လန္းလန္းေတြ႕ျမင္ရမယ့္ ကားမ်ိဳးပါ။ ဒီလက္စားေျခမႈကလည္း နစ္ကို အရင္လိုဘဝၾကမ္းၾကမ္းထဲကို ျပန္လည္ဆြဲေခၚသြားေတာ့တာပါပဲ။(ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Thingyan ဖြစ်ပါတယ်။)
Duration – 1 hrs 38 mins
Source : 1080p.BLU-RAY
Translator – Thingyan
Hd ဖြင့် ဒေါင်းလော့ယူရန်
320mb ဖြင့်ဒေါင်းလော့ယူရန် 👇
သမီးကိုဖုန်းဆက်နှောင့်ယှက်နေသူအား ၆၆(ဃ)ဖြင့်အမှုဖွင့်ရန် ခင်လှိုင်စီစဉ်နေ
အာဆင်နယ်အသင်းမှာ ခြေစွမ်းပြနေသည့် ဆာကာအား လက်ရှိလစာထက် ဆယ်ဆပိုပေးပီး စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုရန် စီစဥ်နေ
Law of Return(2019)